Iza i Kim Yo Jong mety ho mpitondra vaovao any Korea Avaratra?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Iza i Kim Yo Jong mety ho mpitondra vaovao any Korea Avaratra?
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • People • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Narary i Kim Jong Un ary nihombo hatrany ny honohono momba ny fahafatesany. UPDATE: Tamin'ny 1 Mey dia nipoitra ny tatitra momba an'i Kim Jong Un ho hita mitsangatsangana amin'ny orinasa iray.
Raha misy zavatra hitranga amin'ny mpitondra, arivo taona dia ho azony ny firenena 25.5 tapitrisa. Vao 31 taona i Kim Yo Jong ary antenaina fa izy no hitondra jadona sy mpitondra ary mpanao didy jadona vaovao any Korea Avaratra. Izy koa no ho vehivavy jadona tanora indrindra eto an-tany.
Ny fisondrotan'i Kim Yo Jong ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Organisation and guidance omnipotent any Korea Avaratra dia nahatonga azy ho “No. 2 ”eo imason'ny biraon'ny Antokon'ny Mpiasa — ary izany dia mahatonga azy tsy ho mpandova hita maso indrindra amin'ny seza fiandrianan'i Kim Jong Un fa, efa antokon'ny fahefana foibe.
Ny maha-zava-dehibe an'i Kim Yo Jong ao amin'ny OGD, izay manan-kery fiainana-na-fahafatesana amin'ny olom-pirenena 26 tapitrisa ao amin'ny firenena, dia nanampy ny fiheverana mihamitombo fa i Kim Yo Jong dia nokolokoloina nandritra ny taona maro mba handimby an'i Kim Jong Un raha toa ka tsy mahavita azy izy olana ara-pahasalamana na raha maty izy.
Kim Yo-jong dia teraka tamin'ny 26 septambra 1988. Izy no zanaka vavimatoan'ny mpitondra tampony teo aloha Kim Jong-il.
Raha marina ny tsaho ary i Kim Jong-un nandany ny rahavaviny, Kim Yo-jong, dia kasaina ho vehivavy mpanao didy jadona voalohany eo amin'ny firenena.
Nilaza ny ao anatiny fa tanora arivo taona mihazona ny hery niokleary miafina indrindra, Korea Avaratra dia mety ho varavaran'ny fanovana,
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity dia nitatitra ny tranokala Daily NK monina ao Seoul fa sitrana i Kim taorian'ny fizahana fitsaboana aretim-po tamin'ny 12 aprily.
#Korea Avaratra #KIMJONGUNDEAD